Ihowuliseyili Glass Bottle
Ukucoca iglasi ngebhotile / ngeJar
Ibhotile yeglasi yeglasi
Ibhotile yeglasi yokutshiza
Iglasi Bottle / Jar
Ingqayi yeglasi yeglasi
Iglasi Ibhotile yeoyile ebalulekileyo
Ibhotile yeglasi yeziqholo
Glass Nail Bottle Polish
Ibhotile yeglasi yokuthambisa
Glass Ukugcinwa Jar / Bottle
Glass Bottle / Jar
200ml Amber Glass Bottle Pharmaceutical, Pill Jar wi ...
Ibhotile yeglasi yeglasi eyi-500ml kunye ne-swing flip top
16oz 500ml umlomo umlomo yeglasi ingqayi ngeemibala p ...
5oz woozy eshushu iglasi ibhotile engenanto kunye ikepusi kunye ...
Iglasi siko Ibhotile yeziqholo umthengisi lonke iseti e China
I-3ML SILVER Colour ICYLINDRICAL EYIMANYELWE IGLASI YENKQUBO YONYAKA ...
100ml engenanto Frosted Glass Pump iibhotile Cont ...
30ml iglasi amber yeglasi oyile kubalulekile nge evuthulula ev ...
30ml 60ml 120ml ngqo iglasi evuthiweyo yeglasi ebusweni ubuso crea ...
Iglasi Ibhotile amber
8oz 250ml yeglasi Boston ngeenxa iibhotile zokutshiza wit ...
16oz 500ml ecacileyo Boston ngeenxa iglasi engqukuva yokutshiza bo ...
Ukugcwaliswa okungenanto kweCucurbit e-Amber Glass yeLobump Pump yeebhotile enentloko emnyama kunye neNtloko
Ukujija itywina, ukusebenza kakuhle kokutywina, awunakukhathazeka malunga nokuchitheka komxholo. Incinci kwaye ilungele. Kulula ukuyiphatha, ukugqibelela ukuhamba. Kulula ukuyicoca kwaye iphinde isebenze. Ukulungele ukuzalisa i-serum, i-cream, i-lotions, ii-oyile ezifanelekileyo, iimveliso zokhathalelo lolusu, izinto zokuthambisa kunye nezinye iimveliso zokhathalelo lolusu.
I-30ml kunye ne-50ml kukhetho lwakho,
500ml engenanto Shampoo Pump iibhotile zeglasi Refillable Bottle for Shampoo, Body Hlamba, iisepha, Lotions, Oils
Sebenzisa le isepha yokuhambisa ngokukhawuleza indawo yakho yangasese. Esi sixhobo sokuhambisa isepha senziwe ngeglasi eqinileyo ebonakalayo kunye nomzimba oqaqambileyo ekulula ukuwabona, kwaye impompo yentsimbi ekulula ukuyisebenzisa ekubonelela ngesixa esifanelekileyo solwelo ngalo lonke ixesha, ukugcina itafile yakho ingcolile. Esi sixhobo sineglasi esinebhetyebhetye sinokuhlanganiswa ngokulula kunye nawuphi na umhombiso okhoyo, kwaye unokuhombisa naliphi na ikona lekhaya lakho, ukusuka ekhitshini ukuya kwikhawuntara yokuhlambela nakwindawo yokuhlambela. Sebenzisa izixhobo ezihlanganisiweyo zeglasi ukwenza imeko yanamhlanje kunye nelula kwindawo yakho.
I-100 engenanto enokugcwaliswa kwakhona kweGlasi yeBhotile yeBhotile yeFlabathi yeF R Shower Shampoo yeenwele eziCoca isiCoci seManzi.
I-BPA-free shampoo, i-lotion, i-liquid body, ukhilimu, i-foam, i-shampoo kunye nezinye izitya.
Ibhotile inkulu ngokwaneleyo ukuba ibhalwe ngeshampu, ijeli yeshawari, into yokuthambisa umzimba, njl.
Ilungile kwaye iyasebenza kwaye inexabiso lemali iimveliso zekhaya. Iyahlala kwaye inokusetyenziswa ixesha elide;
Nail engenanto iibhotile zeglasi zasePoland ngeeCaps kunye neBrashi
Umzi mveliso we-Easypack uthengisa iintlobo ngeentlobo zeebhotile zeglasi ezinomthamo we-3m ukuya kuma-250 ml, ukusuka kwiibhotile zeglasi zenzipho ukuya kwiibhotile ezincinci zokuthambisa.
15ml abamnyama camera iglasi isikhonkwane ibhotile kunye ikepusi kunye ibrashi
Ubungakanani bentamo ye-11ml ukuya kwiibhotile zeglasi eziyi-50ml zi-13/415, 15/415 kunye ne-18/415, enemibala eyahlukeneyo (enjengokucacileyo, umbala we-amber kunye nokwaleka imibala) kunye neemilo ezahlukeneyo (ezinje ngesikwere, uxande, Isikwere seflat, ukujikeleza, zezindlu, ukulenza, okweqanda kunye nezinye iimilo.
Iibhotile zeglasi ezenziwe ngebhotile ye-5ml ebomvu ebomvu kunye nesiciko sesinyithi kunye nebrashi
5ml ngeenxa zonke ebomvu iglasi wawutyabeka ibhotile, 13/415 intamo, kunye isiciko kunye ibhrashi, i ibhotile isikhonkwane Polish entle. Iibhotile zineentsimbi ezahlukeneyo / iminqwazi yeplastiki. Isiciko sinokuba mnyama, mhlophe, isilivere okanye igolide.
I-3ML ISILIVA IMIBALA YEBHAYIBHILE YENKQUBO YOKWENZA I-NAIL GEL BOTTLE
3ml isilinda yeglasi isilinda ibhotile 13/415 entanyeni, kunye emnyama shiny umaleko kabini ukutyabeka, yibhotile encinci UV LED gel isikhonkwane Polish.
Ibhotile ilungele iintlobo zezinto ezimnyama ezimnyama, matte ezimnyama kunye nesilivere okanye igolide.
Ikepusi leplastiki elinamatye anqabileyo ngaphezulu lenza ukuba ibhotile ibonakale ikhazimla ngakumbi.
1oz 2oz 4oz cobalt blue iglasi izithambiso cream ingqayi kunye isiciko seplastiki emnyama
1oz 2oz 2oz 4oz cobalt 1oz 5oz ingqayi yeglasi izithambiso ilungele ezahlukeneyo mveliso, kubandakanya impilo kunye nobuhle, amayeza, indlela yokuphila kunye nezinto ezisetyenziswayo, ukutya kunye neziselo kunye nokunye.
30ml 60ml 120ml nkqo iglasi evuthiweyo yeglasi yobuso ingqayi kunye nesiciko esimhlophe sentsimbi
I-30ml 60ml 120ml yeglasi ingqayi kunye nesiciko ilungele kakhulu izithambiso kunye nobuhle, ekhemesti, aromatherapy neoli, ukutya kunye neziselo mveliso. Iglasi yegolide evuthiweyo inokubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu ngalo lonke ixesha.
100ml 100ml ecwebezelayo umbala omnyama tye iglasi cream imbiza
Iglasi emnyama yeglasi yokuthambisa ilungele iimveliso ezahlukeneyo, kubandakanya izicoci ebusweni, iiserum ezichasene nokwaluphala, iitoni zolusu, iikhrim zamehlo, amafutha okuthambisa kunye nezinye izisombululo zokhathalelo lolusu, yenziwe ngezinto zeglasi emnyama yokwenyani, engafafazwanga!
30ml iglasi yeglasi oyile kubalulekile ibhotile kunye nesiphako isiciko ebonakalayo
Ibhotile ye-amber ye-30ml enesiciko esine-tamper-proof yinxalenye yoluhlu lwethu lwebhotile. Yenziwe ngeglasi yegolide evuthiweyo, kufanelekile ukuba ucwangcise ukusebenzisa ezi bhotile. Kukwalungele kakhulu ukubonelela ngomhombiso ophezulu weemveliso zakho. I-Amber ikwabonelela ngokhuseleko oluphezulu lwe-UV kuzo zonke iibhotile zethu ezimibalabala, ezenza ukuba kube lula ukubamba iimveliso ezithandekayo kunye nezisombululo.
15ml ecacileyo ibhotile oyile nge black aluminiyam dropper pipette
Indlela elula necocekileyo yokuhambisa isisombululo ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye ngaphandle kwenkunkuma. Xa idityaniswe nebhotile yethu eyi-15ml ecacileyo yedrophu yeglasi nepipette, inokubonelela ngokukhuselekileyo nangokuthembekileyo ekukhetheni i-aromatherapy kunye neeoyile ezifanelekileyo. Ibhotile esekuhleni yeyethu iibhotile zedropha, ke nceda uqiniseke ukuba ibhotile oyifumanayo iya kuba kumgangatho ophezulu kunye nokuqina.
Ngaphantsi koqoqosho oluhlaza, ukupakishwa kweglasi ...
Izizathu ukuthandwa yesoda lime g ...
Zininzi izinto eziphambili ezichaphazela umgangatho ...
iveliso ezifakiwe - Imephu yendawo
Iglasi Bottle Nge Pump wekhadi, Sula iibhotile Pump Pump, Iibhotile zeglasi zeempompo zeeoyile ezifanelekileyo, Iglasi Ibhotile yokuthambisa ngePomp, Iglasi Bottle Nge Spray Pump, Iibhotile zePompo yeGlasi yeShampoo,